तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ : नेता सिंह
२०७३ माघ २२ शनिबार, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । किङकम स्पोर्टस क्लबले आयोजना गरेको उपत्यकास्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले भने—छोटो समयमा तिनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सरकाले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्दछ ।” नेता सिंहले “समयमा तीन तहको निर्वाचन नगरे अहिलेसम्म भएको उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने भएक ... बाँकी अंश»
निर्वाचन कसैले रोक्न सक्दैन : ऊर्जामन्त्री शर्मा
२०७३ माघ २१ शुक्रबार, ताप्लेजुङ। ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले अब निर्वाचनलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । ‘विद्युत् विकासका सम्भावना, समस्या र चुनौती’ विषयको अन्तक्र्रियामा सहभागी हुन शुक्रबार सदरमुकाम आएका मन्त्री शर्माले पत्रकारसँग कुरा गर्दै निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेकाले अब निर्वाचन गर्ने विषय कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गरे। अबको १५ दिनभित्र नै राजनीतिक रुपमा देखिएका समस्यालाई हल गरिने र एमालेलाई समेत साथमा लिएर ... बाँकी अंश»
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास, चुनावको बाटो खुल्ला
२०७३ माघ २० बिहिबार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास भएसँगै नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै विधेयक संसदले पास गरेको बताइएको छ । संसदले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक यसअघि नै पारित गरेको थियो । निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकमा दलबहरुबीच केही विषयमा विवाद भएपछि ढिलाई भएको थियो । ... बाँकी अंश»
नयाँ शक्ति दुई टुक्रा, निर्वाचन कार्यालयमा एउटै नामका दुई पार्टी दर्ता
२०७३ माघ २० बिहिबार, डोटी । नयाँ शक्तिको जिल्ला कार्यसमितिमा विवाद भएको छ । जिल्लाको आधिकारिक संयोजक को भन्नेमै विवाद भएको हो । मोहन बम र शिव सिंह ओली दुबैले संयोजकमा दावी गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो । नयाँ शक्तिको केन्द्रबाटै कुन समिति आधिकारीक हो भन्ने प्रस्ट नपार्दा जिल्ला तहमा विवाद उत्कर्समा पुगेको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीमा नयाँ शक्तिको आधिकारिक समिति दावी गर्दै दुवै समूहले पार्टी दर्ता गरएका छन् । एक पटक दर्ता भैसकेकामा फेरि नयाँ शक्ति पार्टीकै नाम ... बाँकी अंश»
अन्योलमा निर्वाचन आयोग : चुनाव ‘स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय’को
२०७३ माघ १९ बुधबार, काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय कसको निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे आयोग अन्योलमा परेको बताएका छन् । बुधबार पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारमा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसक्दा आयोग अन्योलमा परेको हो ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोग, सांसद र आमजनता समेत कुन तहको निर्वाचन हुन्छ ? भन्नेमा अन्योलमा छन्, यस्तो अवस्था रहिरहनु नह ... बाँकी अंश»
चुनावको तयारीको लागि सरकारले आयोगलाई एक-दुईभित्रै निर्देशन दिन्छ : मन्त्री लेखक
२०७३ माघ १९ बुधबार, काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले एक/दुईभित्रै निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी गर्न सरकारले पत्र पठाउने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री लेखकले भने,‘सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन गम्भिर रुपमा लागिपरिरहेको छ, कानूनी प्रवन्ध मिलाउन ऐन तथा कानूनहरु संसदबाट कतिपय पारित भैसकेका छन्, भने कतिपय पारित हुने क्रममा छन्, निर्वाचन आयोगलाई सरकारले केही दिनभित्रै औपचा ... बाँकी अंश»
निर्वाचन घोषणा नगरे सरकारमा बस्नुको औचित्य छैनः नेता खनाल
२०७३ माघ १६ आइतबार, इलाम । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न नसके नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन् । संविधान कार्यन्वयनका लागि जनपरिचालनअन्तर्गत चार महिने अभियानको क्रममा आइतबार इलामको समालबुङ गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेता खनालले ‘आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ, यदि त्यसका लागि अहिलेनै निर् ... बाँकी अंश»
बैशाखमा निर्वाचन हुने : गोपालमान श्रेष्ठ
२०७३ माघ १६ आइतबार, स्याङ्जा । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले बैशाख महिनामा स्थानीयतहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । भीरकोट नगरपालिका ८ स्थित श्री शहिद शुक्र उच्च माविको ६१ औ बार्षिकोत्सव तथा चार कोठे भवनको उदघाटन गर्दै नेता श्रेष्ठले बैशाखमा स्थानीयतहको निर्वाचन हुने बताएका हुन् । संविधान शंशोधन आवश्यकता सगै मुलुकमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउदै नेता श्रेष्ठले लामो समय निर्वाचन नहुदा भष्ट्रचार देखि विकासका काम ओझेलमा परेको बताए । मुलुकको व ... बाँकी अंश»
निर्वाचनका बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटे प्रमुख आयुक्तले
२०७३ माघ १६ आइतबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा रहन भनेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक सहमतिका आधारमा आगामी जेठको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणाको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी प्रमुख आयुक्त यादवलाई गराएका थिए । प्रधानमन्त्री र आफूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमै केन्द्र ... बाँकी अंश»
निर्वाचन भएन भने जनता र इतिहासले प्रचण्डलाई नै सराप्ने : ओली
२०७३ माघ १५ शनिबार, विराटनगर । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै हर कुनै जुक्तिले सरकार चलाइराख्ने तथा आयु लम्बाई रहने काम मात्रै भए देश र सरकारकै लागि दुर्भाग्य हुने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार साँझ पत्रकारहरुलाई अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने सुनाए । निर्वाचन भएन भने मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा फस्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो अवस्थामा जनता र इतिहासले अहिलेकाे सरकारलाई सरा ... बाँकी अंश»
सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको छ: नेम्बाङ
२०७३ माघ १५ शनिबार, विराटनगर । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै नेता नेम्बाङले सोही कारण निर्वाचनसम्बन्धि विधेयक संसदमा पेस गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारले निर्वाचनको सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएको भएपनि नेम्बाङले निर्वाचनसम्बन्धि दुईवटा विधेयक ल्याएको भनेर जनतालाई भ्रमित गर्न खोजेको धारणा प्रकट गरे । नेता नेम्बाङले सरकारले निर् ... बाँकी अंश»
स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता अनिवार्य गराउन सभामुखलाई पत्र
२०७३ माघ १५ शनिबार, विराटनगर । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गर्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल मोरङले सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विराटनगरमा महिला सन्जालकी उपाध्यक्ष्ाँ विमाला दाहालले निर्वाचन कानुनमै सो कुराको व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइन् । सवै क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता शुनिश्चित गर्न भन्दै सभामुख घर्तीमगरलाई उनले अनुरोध गरिन् । ज्ञापनपत्र बुुझ्दै सभामुख घर्तीले आफु सबै क्षेत् ... बाँकी अंश»
निर्वाचनका लागि दलहरुबीच मतभिन्नता छैन : सभामुख घर्ती
२०७३ माघ १५ शनिबार, विराटनगर। सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसद्बाट आगामी सोमबार पारित हुने बताएकी छन् । सभामुख घर्तीमगरले पर्सी सोमबारसम्ममा निर्वाचनसम्बन्धी सबै बिधेयक पारित भएर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने समेत बताएकी छन् । नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घ मोरङको लेटाङमा आयोजना हुने नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन जाने क्रममा विराटनगर विमानस्थलमा सभामुख घर्तीले पत्रकारहरुसँग संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हु ... बाँकी अंश»
निर्वाचनलाई साझा सर्तका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ —सभापति देउवा
२०७३ माघ १५ शनिबार, नेपालगन्ज । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै दलको सहमतिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, बाँकेद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने—“संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई साँझा सर्तका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।” सरकारले निर्वाचनको सबै आधार छिटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ‘दलहरुबीच सहमति बन्यो भने छोटो समयभित्र पनि निर्वाचन हुनसक्छ भने । ए ... बाँकी अंश»
निर्वाचनको मिति घोषणा २ हप्ता भित्र, पार्टीको पूर्णता १ हप्ता : देउवा
२०७३ माघ १३ बिहिबार, दाङ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन घोषणा अब २ हप्ता भित्रै हुने बताएका छन् । प्रेस युनियनले तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा सभापति देउवाले स्थानीय नियकाको निर्वाचन पहिलो चरणमा गर्ने गरी सकारले मिति घोषणाको तयारी गरेको बताए । देउवाले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा अघि मधेसी र आदिवासी जनजातिका मुद्धाहरु सम्बोधन हुन्छ । संविधान संशोधन विधेयक पनि पास हुन्छ ।’ संविधान संशोधन संसदबाट पास हुने र पास भए लगतै ३ वटै निकायको निर्वाचन हुन ... बाँकी अंश»
सांसदहरुको प्रश्न : संविधानको प्रावधान अनुसार निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन ?
२०७३ माघ १२ बुधबार, काठमाडौँ । सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न तथा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारसित माग गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले संविधानको प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन ? के कारणले निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा गर्न छेक्यो ? भन्ने प्रश्न गरे । नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध् ... बाँकी अंश»
निर्वाचन सम्बन्धि दुई विधेयक संसदमा पेश
२०७३ माघ ११ मंगलबार, काठमाडौं । स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ समितिको प्रतिवेदनसहित मंगलबार व्यवजस्थापिका–संसद बैठकमा पेश गरेका हुन् । संसद्ले गत असोज ३० गते ती दुई विधेयक दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिमा लामो छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित मंगलबार पुनः सदनमा पेस गरिएको सभाप ... बाँकी अंश»
'निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसके सरकार छाड्नुस्' : ओली
२०७३ माघ ८ शनिबार, भक्तपुर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको १० महिनाभित्र सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले भक्तपुरले शनिबार आयोजना गरेको पार्टीका नयाँ सङ्गठित सदस्यलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ओलीले आगामी कात्तिक–मङ्सिरसम्म तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। सरकारले तीनवटै तहको निर्वाचन कार्यतालिका मिति तत्काल घोषणा गर्न नसक्ने हो भने सत्तामा बसिर ... बाँकी अंश»
निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुन्छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
२०७३ माघ ४ मंगलबार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक दलको सहमतिमा छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने बताएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेटस(युएइ)को चार दिने भ्रमणबाट मंगलबार स्वदेश फकिएर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने “भ्रमणमा जानु अगाडि पनि मैले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको थिए । आयोगका पद ... बाँकी अंश»
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ : मन्त्री पाण्डे
२०७३ पौष २८ बिहिबार, ललितपुर । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने बताएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले गोदावरीमा गरेको सुनौला हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन तथा प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री पाण्डेले सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई तोडेर हुने निर्वाचन सफल बनाउन तयारी अवस्थामा रहन स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । स्थानीय विकास अधिकारीलगायतका कर्मचारीले उचित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनतर् ... बाँकी अंश»